Pietisma - Wikipedia
Ny pietisma dia fihetsiketsehana na firehana ara-pivavahana protestanta naorin'i Philipp Jacob Spener (1635-1705), izay pastora loterana alzasiana nonina tao Frankfurt am Main (frantsay: Francfort-sur-le-main) tao Alemaina, izay mihevitra ny fitiavam-bavaka ho zava-dehibe indrindra amin'ny fivavahana.
Tamin'ny taona 1670 dia nitsangana ny atao hoe collegia pietatis izay namaly ny hetahetan'ireo mitady fanajana amin'ny antsipiriany ny fanao momba ny fivavahana. Ao amin'ny boky nosoratany hoe Pia desideria tamin'ny taona 1685 dia nanantitra ny amin'ny filana ny fifantohan'ny tsirairay sy ny fihetsehampo ara-pivavahana izay heveriny fa tsara kokoa noho ny fahalalana ny antsipiriany amin'ny foto-pampianarana lazaina hoe marina (ortodoksia) momba ny fivavahana. Ny Soratra Masina dia tsy fanangonam-pahalalana ihany fa loharanon'ny finoana indrindraindrindra. Nampiely ny pietisma manerana an'i Alemaina manontolo ny mpianatr'i Spencer toa an'i August Hermann Francke sy i Nikolaus Ludwig von Zizendorf.
Ny havitrihan'ireo mpanaraka ny pietisma amin'ny asa famitana iraka (misiona), indrindra avy tao Halle ary koa avy amin'ny Fiangonana moraviana (angisy: Moravian Church) na Rahalahy morava (Frères moraves) dia nampisy akony ny pietisma teo amin'ny protestantima. Izany akony izany dia hita hatrany amin'ny fiainan'i John Wesley ny atao hoe fiovam-pinoana sy tamin'ireo fotoana nanombohan'ny Fifohazam-panahy protestanta tao amin'ireo tany miteny frantsay.
Isan'ireo olona malaza tamin'ny fandraisana anjara tamin'io fihetsiketsehana io na nadray ny voktr'izany i Emmanuel Kant sy i Gotthold Ephraim Lessing sy i Friedrich Hölderlin ary i Friedrich Schleiermacher.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pietisma&oldid=972262"
Dernière modification le 14 Jolay 2019, à 17:34
Voaova farany tamin'ny 14 Jolay 2019 amin'ny 17:34 ity pejy ity.